Agab Kala Duwan Oo Loogu Deeqay Hoyga Agoonta Fiiq - Cakaara News
Agab Kala Duwan Oo Loogu Deeqay Hoyga Agoonta Fiiq
Fiiq(CN) Khamiis 14ka January 2016, Xafiiska Maamulka DDSI ayaa Agab kaladuwan oo deeq ah gaadhsiiyey Ardayda Dugsiga Hoyga Agoonta ee uu nabad diidku waalidkood laayay ee magaalada fiiq.
Gudoonsiinta agabkan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin kasocotay xafiiska maamulka DDSI, mas'uuliyiinta maamulka.Gobolka Nogob, Maamulka Degmada Fiiq, qaar kamid ah odayaasha iyo waxgaradka magaalada fiiq iyo waliba maamulka iyo Ardayda Dugsiga Hoyga Agoonta.
Hadaba, gudoonsiintii deeqdan ayaa waxaa ugu horayn kahadlay Gudoomiyaha Gobolka Nogob Mudane Axmed Aadan Axmed oo ugu horayn u mahadceliyay Xafiiska Maamulka DDSI islamarkaana u soo jeediyay ardayda hadalo dardaaran iyo dhiirigalin isugu jira.
Sidoo kalana, maareeyaha dugsiga hoyga agoonta fiiq marwo Ubax Mursal Axmed ayaa sheegtay in had iyo jeer ay xukuumadu taageero buuxda oo aan kala go' lahayn dhan kasta ay lagarab taagan tahay ardaydan hoyga agoonta ee waalidkood nabadiidku laayay iyadoo mahadnaq balaadhana usoo jeedisay. waxayna kubooriday ardayda in ay ahaadaan kuwa xusuusta marwalba dadaalada xukuumada oo ay kudhiiradaan inay heer kagaadhaan waxbarashadooda si ay ugu abaal-gudaan.
Ugudanbayna, agabkan oo ka koobnaa labiska ardayda oo dhamaystiran, qalabka cuntada lagu diyaariyo, sariiro, kuraas, buugaag iyo qalabka madadaalada xiliyada fasaxa ayay ujeedadiisu ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa mooraalka ardayda islamarkaana loogu dhiirigalin lahaa kamidho-dhalinta waxbarashadooda.